टिकटक बनाउँदा झोलङ्गे पुलबाट खसेका रमेशको गयो ज्यान,आखिर कसले उस्कायो रमेशलाई ? दिदिहरु मिडियामा-भिडियो हेर्नुहोस – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Video/टिकटक बनाउँदा झोलङ्गे पुलबाट खसेका रमेशको गयो ज्यान,आखिर कसले उस्कायो रमेशलाई ? दिदिहरु मिडियामा-भिडियो हेर्नुहोस
यातायात व्यवस्था कार्यालयले गत असारदेखि नै कार्यालय खुला गरेर सवारी दर्ता र नवीकरणको सेवा भने दिँदै आएको छ । यसरी लामो समयसम्म लाइसेन्स नखुल्दा सेवाग्राही मर्कामा पर्दै आएका छन् । सामान्य अवस्थामै लाइसेन्सका लागि भीडभाड हुने गरेकामा नौ महिनासम्म स्थगित हुँदा अब झनै चाप बढ्ने भएको छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **